Anyị na-enyocha ọmarịcha nleba anya 4K UHD nyochaa Philips 241P6 | Akụkọ akụrụngwa
Anyị na-enyocha ihe ngosi 4K UHD Philips 241P6 dị egwu
Nabata ọzọ na nyocha Actualidad Gadget ọzọ, na ọ bụ na na anyị na blog anyị na-amasị-ekwu okwu banyere nnọọ ihe niile nwere ike gburugburu uto nke n'ji ngwá electronic, ụfọdụ ụbọchị anyị nwere ọkà okwu, ụbọchị ndị ọzọ anyị nwere ngwa na taa anyị na-ewetara gị a nyochaa na ikpọ e ji mara nke mere na ị nwere ike tụlee ma ọ bụ ọ bụghị nzụta gị, nyocha bụ ihe kpatara anyị.
Nke kacha mma n'ụlọ ọ bụla, taa anyi nwere Philips 241P6 n'aka anyị, ihe ntinye 24-inch nwere mkpebi 4K UHD, ka ihe ọ bụla ghara ịkọ gị. Nwee gamer ma ọ bụ ọkachamara, ụkpụrụ ileba anya a ga-emezu ihe niile ị chọrọ. Ka anyị lebakwuo anya na ya iji hụ ma ọ bara uru, echefula nyocha anyị.
Dị ka ọ dị na mbụ, ndeksi ga-abụ ezigbo ezigbo ibe gị na nyocha a, nke a ka anyị na-ekwu na ọ bụrụ na ịchọrọ ịma etu ihe nyocha a Philips 241P6 si arụ na ọnọdụ ụfọdụ, gaa ozugbo na ngalaba na-anakọta njirimara ahụ, mgbe ịpịrị na ndeksi ya Ga-eduzi gị ebe ahụ ozugbo. N'akwụkwọ anyị nọ n'ihu onye nlele na otu panel 4K LCD na UltraClear teknụzụ. Ka anyị hụ ma ọ dịrị ndụ na nkọwa niile Philips na-ere na weebụsaịtị ya.
1 Nyochaa nhazi
2 Akụrụngwa na ihe owuwu
3 Njikọ nke Philips 241P6 nyere
4 Nka na ụzụ
5 Nyochaa ngwanrọ na nkwalite
6 Uche ederede
Na-enweghị nkwado, Philips elebara anya n'ọdịnala nke ndị nlere anya ọkachamara, ndị raara onwe ha nye ọrụ, ma eleghị anya ọ chọkwara iji uru a. Ịgba Cha Cha na n'oge na-adịbeghị anya ha nwere ngwaahịa ndị ahụ nwere nnukwu akụkụ na ime ihe ike. N'ezie, e nweghị iota nke iji belata ma ọ bụ zoo okpokolo agba. Anyị na-eche ihu nwa ojii ekwuputara nke ọma, nke igwefoto na igwe okwu si n'elu pụta. Ka ọ dị ugbu a, akụkụ ala ahụ na-enye anyị obere ndị ọkà okwu n'akụkụ abụọ ahụ, yana usoro nke ihe ọmụma nwere ọgụgụ isi nwere ọgụgụ isi na-arụ ọrụ nke ọma.
N’etiti ala anyị na-achọta akara ngosi Philips (nke dị n’elu LED nke ga-egosi ọkwa ọrụ nke nyocha ahụ), nke jisiri ike idobe onwe ya nke ọma yana mbinye aka agbanweela obere ma ọ bụ ihe na-adịbeghị anya. N'akụkụ aka nri, agbakwunyere n'ime ọkà okwu, anyị na-ahụ bọtịnụ nhazi na ngbanwu ihe nlere anya, nke na-anaghị enwupụta ọkụ, ihe anyị ga-enwe ekele maka ya.
Ntọala ahụ anaghị eme ntakịrị ntakịrị iji belata nha ya, ọ bụghị oke, anyị na-ahụ ntọala gbara gburugburu belụsọ na n'ihu ahụ ọ gbagọrọ agbagọ, ọ dị mma ịhapụ ngwaọrụ ahụ adịghị mma. O doro anya na ọ bụ nnukwu nyochaa, ọ bụ ezie na ọ naghị adị arọ. Otú ọ dị lotu ntọala na-arụ ọrụ ya nke ọma n'ihi na anyị enweghị ike ichefu na anyị nwere nyocha nwere ọtụtụ nhọrọ ndozi na ọkwa ọkwa, na maka nke a ọ dị mkpa ịnwe ntọala siri ike. Ọnụ ọgụgụ zuru ezu bụ 563 x 511 x 257 millimeters na nkwado ahụ gụnyere, na ngụkọta nke 5,85 Kg, yana nkwado ahụ.
Akụrụngwa na ihe owuwu
Philips emehieghị ọ bụla iji wuo ngwaahịa ya n'ụzọ ọjọọ, plastic ojii bụ isi ihe eji eme ihe nyocha a, Otú ọ dị, ọ na-enwe ekele dị ukwuu maka ntụpọ ndị ọ na-emetụ na imetụ kwa ụbọchị, ebe ọ bụ na mbipụta akwụkwọ ndị ahụ agaghị adịgide ma ọ gwụla ma anyị nwere aka ruru unyi. Ọ bụghị uzuzu dị ukwuu, nke ị maworị nwere nhọrọ maka ụdị ojii ojii ndị na-adịchaghị mma. N'aka nke ọzọ, dịka anyị kwurula, anyị ga-ahụ ihe nlekota dị mfe ihicha ma metụ aka, na-enweghị atụ egwu ọkọ ma ọ bụ unyi mgbe niile, isi ihe dị mma.
Akụkụ azụ nwere okporo ígwè ije, ya bụ, ihe ndabere nke anyi ga - esi bulie ma wedata ihe nlere anya. Eziokwu bụ na ọ na-eguzogide ọgwụ, agbanyeghị, ọ na-enye anyị ohere ịmegharị nyocha ahụ na-enweghị nnukwu mbọ.
La SmartErgoBase Ọ ga-enye anyị ohere ịhazị ileba anya na mkpa anyị, nghazi ngụkọta nke 130 millimeters, na-amasị anyị. N'otu ụzọ ahụ nkwupụta nke isi ahụ na-enye anyị ihe ruru ogo 90 nke ntụgharị zuru oke. Ogwe ga-enyere anyị aka ịkwaga ya na ọkwa ruru 175 ogo mgbe ọchịchọ ahụ ga-adị iche n'etiti -5º na 20º. N'ezie, ị gaghị enwe nhazi nhọrọ
Njikọ nke Philips 241P6 nyere
Anyị ga-enwe usoro ịgba mgbaama nke ntinye akara, ka ị ghara ileghara ihe ọ bụla anya, anyị na-amalite site na ntinye ngwa ngwa na ntinye analog. VGA Edepụtara na-acha anụnụ anụnụ, nke ihe oyiyi dijitalụ nke eriri ahụ nyere DVI sọrọ njikọ HDCP. Maka ndị ọkachamara ọ nwere njikọ Ngosipụta, ọ bụghị na obere ụdị ya, nke a na-ahụkarị na laptọọpụ dị ka MacBooks, mana n'ụdị ọkọlọtọ ya. Iji rụchaa anyị ga-enwe a HDMI 2.0 na teknụzụ MHL 2.0 Na nke ijikọ ụdị ngwaọrụ ọ bụla na-enweghị nsogbu nha.
N'otu akụkụ anyị ga-ahụ a USB 3.0 njikọ osisi, na nke anyị ga-enwe 3 USB 3.0 njikọ dị ka anyị kwuru, na a USB 3.0 SS njikọ. N'aka nke ọzọ, na-esote ntinye nke ihe nlekota ndị ọzọ anyị ga-ahụ ntinye ọpụpụ abụọ nke 3,5 mm, otu maka ọdịyo gakọrịta na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, yana ọdịiche dị iche na oji.
Na nkenke, anyị agaghị ahụ ụkọ njikọ, dị anya na ya, yabụ Philips 241P6 ga-abụ ihe ọzọ dị mkpa mgbe ọ bịara ịchọta nyocha iji rụọ ọrụ.
Nke mbu anyi nwere otu panel AH-IPS LCDNke a pụtara na anyị ga-enwe ike ịhụ ya nke ọma site n'akụkụ niile, ahụmịhe anyị bụ nke ama ama ama, yabụ m ga-ekwu na ị gaghị enwe ike ịchọta ebe nyocha a anaghị adị mma. Dị ka ị maara nke ọma, na LCD bụ backlit, na nke a Philips White ikanam. Ọnụ ọgụgụ nke ogwe a bụ 60,5cm (23,8 ″) n'ozuzu, yana ebe nlele dị mma nke ọma. Olee otú ọ ga-abụ na uzọ ọzọ, anyị na-eche ihu a panoramic panel na 16: 9 ruru, n'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ UltraWides na-ewu ewu.
Mkpebi kachasị mma nke nyocha a na-arụ ọrụ bụ 3840 x 2160 na 60 Hz, nke na-enye anyị mkpebi Ultra HD ma ọ bụ 4K, dịka ịchọrọ ịkpọ ya. Ìhè ahụ ruru 300 cd / m2, ọ karịrị oke mana ọ karịrị akarị, nke bụ eziokwu bụ na ọ bụ ihe nlele na-adịghị ama jijiji, ọ na-eme omume nke ọma na anya. O nwere oge nzaghachi nke 5ms, nke dị mma mana ọ nwere ike iyi ihe dị elu maka ọtụtụ ndị egwuregwu, ndị na-ahọrọ oge nzaghachi nke 2ms.
Typicaldị ọdịiche dị iche iche ka mma site na teknụzụ ya SmartContrast, na nke bụ eziokwu bụ na anyị ahụwo ndị ojii miri emi, na-enweghị nchapu ọkụ, na-eburu n'uche na anyị na-eche panel LCD ihu na nke a bụ ihe ị ga-echebara.
Nyochaa ngwanrọ na nkwalite
Maka ndị na ebido ebido anyị enweela obi ụtọ SmartImage, otu nhọrọ nke na-enye 8 bits nke FRC enwekwu agba agba, yabụ o kwesịrị inye anyị ihe dịka 10 bits, ihe dị ka nde 1074 maka ezigbo ngụsị akwụkwọ. N'otu aka ahụ, isi ọzọ nye ndị ọkachamara bụ na ọ nwere ụkpụrụ agba agba 99%, n'ụzọ bụ isi sRGB -enye ezi uche na agba.
Maka ndị ọrụ na-anọ ogologo oge n'ihu nyocha, anyị nwere FlickerFree, teknụzụ na-enweghị mmerụ ọkụ nke ahụ belata eyestrain. Nke bụ eziokwu bụ na site n'iji ya eme ihe, anyị nwere ezigbo ntụsara ahụ, dị ka anyị kwurula, ọ naghị eju ihe ọ bụla anya ma ọ bụ kpatara nsogbu, ọ na-agbanwe na gburugburu ebe obibi, ọkachasị ekele ya sensọ PowerSensor Ha na-enye ego ruru 80% na-enyocha site na infrared ma ọ bụrụ na onye ọrụ dị, na-ebelata nchapụta nke ihe nlele na akpaghị aka ma ọ bụrụ na ị pụọ. Mana ọ bụghị naanị ihe mmetụta, anyị nwekwara ihe mmetụta ọkụ iji nye nchapụta zuru oke ma chekwaa na oriri.
N'aka nke ọzọ, teknụzụ MHL dị na HDMI anyị Ọ ga-enye gị ohere ijikọ, dịka ọmụmaatụ, ekwentị mkpanaaka na-enweghị nsogbu ndozi ihuenyo, ihe a ga-enwe ekele maka ya. Ihe ikpeazu nke oru bu MultiView otú ahụkarị. Eziokwu bụ na ngalaba ntọala ya gụnyere nwere ike ịnwe interface interface, mana ọ bara uru ma rụọ ọrụ ahụ. Na njedebe, kamera ya nwere ihe ngosi ọkụ na igwe okwu, ọ ga-enwe naanị 2MP ka ọ ga - eme ka anyị pụọ n'ụzọ.
Anyị na-anwale ihe nlele ahụ n'akụkụ dị iche iche, nke bụ eziokwu bụ na n'ihe gbasara egwuregwu vidio na njikwa anyị ahụghị nsogbu ọ bụla, ọ na-enyekwa ezigbo agba dị mma nke masịrị anyị, ọkachasị ma ọ bụrụ na anyị jiri ya tụnyere ndị ọzọ dị elu- end Monitors na anyị nwere gburugburu ebe a. Ebe anyi hutara ufodu ihe nzuzu di na nhazi nke enyere site na macOS site na igwe HDMI, ileba anya na-enweta akara ngosi 4K, agbanyeghị, ọ dị ka ọ dị umengwụ dabere na mmegharị onyonyo, ọ bụghị na mgbasa ozi vidiyo.
N'iji ya na Windows 10, ileba anya agbachitere onwe ya nke ọma, ọkachasị ma ọ bụrụ na anyị edozie akụkụ ya, ọ bụ ezie na ndị a bụ okwu nke onwe. O doro anya na Philips 241P6 a bụ ezigbo nhọrọ dị ka onye na-enyocha okporo ụzọ, agbanyeghị, n'ihe gbasara imewe ọ bụghị nyocha ahụ onye ọ bụla chọrọ ịnwe n'ụlọ., O yiri ka a na-eji ndị ọkachamara eme ihe ma ọ bụ ọha na eze.
€549 a €449
Onye edemede: 78%
Ihe dị oke ọnụ
Ọtụtụ okpokolo agba
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Nyocha » Anyị na-enyocha ihe ngosi 4K UHD Philips 241P6 dị egwu
Apple AirPods na-ebelata oge mbubata echere
Xbox One S Minecraft Edition, naanị maka ezigbo ndị egwuregwu